Mimhanzi Yekunyarara, iro basa nezve hunhu, hwepakutanga uye husingaenderane. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Fantasy, Type, Literature, Novela
Mumhanzi wekunyarara, nemunyori Patrick Rothfuss.
Mumhanzi wekunyarara ingano naPatrick Rothfuss, munyori anozivikanwa ne trilogy yeiyo Makoronike eMuurayi weMadzimambo. Iyi saga, ine chirongwa chekutanga chakaumbwa mukati merondedzero yakawandisa ye Rwiyo rweMurazvo uye Kutinhira (La Rwiyo rweMurazvo uye Kutinhira), yakakwenenzverwa zvakanyanya uye yakagamuchirwa zvakanaka nevaverengi, uye iri pakati mabhuku akanakisa ekufungidzira.
Zvisinei, Mumhanzi wekunyarara i "nyaya yakaparadzana." Kunyangwe chiri chikamu chechisiko che Muurayi wemadzimambo and the Zwork Nyika, hakusi kuenderera kwetatu, sezvo ichingotarisa pane hunhu Auri. Munyori iye amene anonyevera mune rake rekutanga kuti harisi bhuku riri nyore kunzwisisa kana "usati waverenga mabasa angu apfuura."
2 Chirevo chisingaenderane
3 Kubudirira kwechirongwa cheMumhanzi wekunyarara
4 Basa rinotora pfungwa
5 Iri basa rinokoka kukoshesa hunhu hwezvinhu
Patrick Rothfuss akaberekerwa muMadison, Wisconsin, United States; Chikumi 6, 1973. Kubva ari mudiki kwazvo akazove muverengi anoshingairira, izvi nekuda kwemhuri yake, avo vaisangova vaoni. Kunaya kwemamiriro ekunze mudhorobha rekwake kwakabatawo basa rakakosha murudo rwake rwekuverenga. Kune zvese izvi, munyori kashoma akasiya imba yake.
Akawana degree muChirungu Literature kubva kuYunivhesiti yeWisconsin-Stevens Point muna 1991.. Munyori akatanga kushanda saPurofesa panzvimbo iyoyo mushure mekutora kosi yekudzidzisa kuWashington State University. Yake Rwiyo rweMurazvo uye Kutinhira yaive yakakura zvekuti aikwanisa kuigovanisa muzvikamu zvinoverengeka, chimwe chazvo chine kodzero Nzira yaLevinshir, uye vakamushandira kuti awane mubairo weVadiki Vanyori ve2002.
Kuzvitsaurira kwayo kwakauya mu2007 neiyo Quill Prize yeakanakisa fungidziro uye sainzi fungidziro yenhau, inowanikwa nebhuku rekutanga re Rwiyo rweMurazvo uye Kutinhira, akabhabhatidzwa Zita reMhepo. Mamwe mabasa ake ane mbiri ari The Adventures of the Princess uye Mr. Whiffle (2010), Kutya munhu akachenjera (2012) uye Muti wemheni (2014).
Pasina mubvunzo, zvakaoma kwazvo kuwana bhuku rine chirevo chekutanga "haudi kuverenga bhuku iri", Zvisinei, izvi ndizvo chaizvo zvakataurwa naPatrick Rothfuss mune anteroom yake yakaburitswa muna 2014.
ari vashoropodzi vaRothfuss vanotaura kuti «bhuku iri yaingova nzira yekuenderera mberi uchiita purofiti kubva mukubudirira kwe Muurayi weMadzimamboZvakanaka, kana munhu wese akamirira chikamu chechitatu chetatu, munyori anoonekwa neichi ». Iko kutaura kwakapihwa nemumwe wevashandisi veiyo portal quelibroleo.com, mukushatirwa kuri pachena mukuvandudzwa kwegakava.
Kune vamwe vatsoropodzi, iyi sumo yaive nzira yekuti munyori akumbire ruregerero (uye kutarisira zvakaipa kuongororwa) yekugadzira iwo anofinha mavara. Panyaya iyi, Rothfuss akataura mubvunzurudzo "iri ibasa risina kutaurirana, pasina chiito uye pasina kukakavara ... zvinenge zvisinganzwisisike kune ani zvake asingazive mamwe mabasa angu." Mutsumo yeThe Music of Silence, anonyevera zvakajeka "kana iwe uchazotanga kuziva zvakasikwa zvangu, usatanga nebhuku rino."
Nekudaro, kupera kwesumo kukokwa kwakagadzirirwa vateveri venyaya dzake. "Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvehunhu Auri, bhuku iri rakakukwanira." Hazvina kubvira zvataurwa nani, nekuti rondedzero yenyaya yaPatrick Rothfuss inoendesa kumuverengi kunzwa kwekuteerera nhetembo, munzira inonakidza uye yekutanga yekuongorora nyika yake yemashiripiti.
Kubudirira kwechirongwa Mumhanzi wekunyarara
Musimboti webhuku rino kunzwisisa "Subreality", iyo labyrinthine uye isinganzwisisike zvakasikwa zvekare uye zvakasakara tunnel zviripo pasi peYunivhesiti. Iyo yekupedzisira inzvimbo inoona nezve kugashira zvakagadzirirwa uye zvine hungwaru zvisikwa pasirese, izvo zvakare zvinotsvaga kudzidzisa zvakatenderedza sainzi yehunyanzvi uye alchemy.
Mutsara wekutanga webasa "... ini ndaiziva kuti uchauya nezuva rechinomwe" unounza kunzwa kwekumirira uye unopinza muverengi muchakavanzika. Nekutanga kwakadai, Patrick Rothfuss anokwanisa kubata tarisiro yeavo vasina hanya nesumo ndokuenderera kwenguva refu munhoroondo.
Mune ino nyaya, Auri muchengeti weSpecial, basa raakazvimisikidza uye iro raanoshandisa "kuchengetedza mwero." Iri basa ibasa rakakodzera kwazvo rechimiro chakanyatso zadzwa nehurongwa uye pfungwa yezvinhu. Kunze kwekufungidzira kwekutanga, protagonist inoburitsa manzwiro echokwadi ekutenda kukosha kwezvidiki zvidiki.
Basa rinotora pfungwa
Sezvo zviitiko zvinoitika, iyo rondedzero inowedzera kuwedzera kunzwa, sezvo zvakawanda zvezviitiko zviri murima rakazara uye / kana kunyudzwa pasi pemvura. Naizvozvo, zvinodikanwa kunatsiridza pfungwa shanu, pamwe nekuona mamiriro ezvinhu kubva kwakasiyana maonero uye kutendeukira kune intuition.
Iwo masuo eiyo Subreality anga ari mucherechedzo wezororo repasi pekusaziva mukati merwendo rwekuzviziva uye kuongorora kwechinhu chemukati. Nekudaro, hazvigoneke kuti usanzwira tsitsi protagonist kunyangwe ari pachena kusagadzikana kwekutanga mukutarisana neshanduko dzisingatarisirwe kana zviitiko.
Iri basa rinokoka kukoshesa hunhu hwezvinhu
Runako rwechisiko ichi runoratidzwa mumweya unoonekwa mune zvese zvinhu, iyo inofanirwa kuremekedzwa uye kubatwa nerudo. Basa racho rinobatawo kuvimbika kusinga tsanangurike, izvi zvinoonekwa mune hunhu hwepixie yayo Foxen.
Quote nemunyori Patrick Rothfuss - @mobifriends.
Mumhanzi wekunyarara ibasa remitemo inotaura nezvorudo rwaAuri rusingaperi kuzvinhu zvese zvinomukomberedza. Akaisawo pfungwa pakunzwisisa kukosha kwechinhu chimwe nechimwe, pakuedza kunzwisisa nyaya yepasi pechinhu chimwe nechimwe chiripo, pasina kumira kuti uvatonge nechitarisiko chavo.
Iyi nhoroondo inofadza kwechokwadi kune vateveri venyika yemashiripiti yakagadzirwa naPatrick Rothfuss. Iri ibhuku rine chimiro chechokwadi uye chisingaenderane, iro basa risingafanire kushayikwa muraibhurari yechero muverengi akanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mumhanzi wekunyarara